Pitsana : Manambady Karàna, manohana azy tanteraka ny vadiny
Vao mahita azy dia mahatsikaritra fa tena pitsana tokoa i Pitsana. Kelikely izay izy faihany koa, tena sariaka ! Tafahaona taminy ny gazety Jejoo ka niresadresaka momba ny antony nisafidianany hilalao sarimihetsika izy no sady nizara ampahany amin’ny fiainany andavanandro.
Jejoo: Iza marina moa i Pitsana ?
Pitsana: Randriamampianina Harimanitra no tena anarako. Ny “Michaëlla” dia anarana vao nampidiriko tao anaty kôpiako fa tsy nomen’ny ray amandreniko ahy. Efa manambady aho fa mbola tsy niteraka ary ilay vadiko ao anaty horonan-tsarimihetsika “Pitsana” iny ihany no vadiko ivelan’ny horonan-tsary. Tany amin’ny taona 2015 izahay no natao mariazy, taorian’ny fialan-tsasatra nataoko tany Maorisy. Tia mahandro sakafo aho ary tia mijery fahitalavitra, satria tsy dia mivoaka ny trano firy. Mankafy “nounours” koa aho ary tena manana betsaka mihitsy.
Jejoo: Mitovy amin’iny any anaty horonan-tsary iny ve ny tena toetranao ?
Pitsana: Izaho aloha tsy mora tezitra e ! Mitovy amin’i Pitsana ihany.
Jejoo: Manambady Karàna ianao, tsy mametraka olana ve izany amin’ny filalaovana sarimihetsika?
Pitsana: Tiany koa ilay izy ka tsy misy olana mihitsy. Manohana ahy aza izy amin’ny zavatra ataoko.
Jejoo: Manao ahoana tokoa izany manambady Karàna ?
Pitsana: Tsy satria manambady karana aho akory dia migadra ato an-trano tsy afaka mivoaka sy tsy manao na inona na inona. Mamela ahy hanao izay tiako izy, afaka miaraka amin’ny namako aho, mandeha mivoaka araka izay tiako, misafidy ny akanjo tiako. Tena mitovy amin’ny manambady lehilahy gasy, fa tsy voafehin’ny fombafomba Karàna. Izy aza manomboka miala tsikelikely amin’ilay fomba ary efa mivavaka any amin’ny fiangonana katôlika miaraka amiko.
Jejoo: Manao ahoana indray kosa ianao sy ny lamaody?
Pitsana: Tia solomaso be mihitsy aho. Manana karazany maro aho ary tsy maintsy misy solomaso miisa 3 any anaty poketrako rehefa mivoaka aho. Arakaraky ny toerana haleha mantsy no hiovako solomaso. Matetika koa aho no manary azy ireny, fa tsy mividy amin’ireny lafo be ireny koa anefa. Any Maorisy koa, be dia be mihitsy ny safidy amin’ny solomaso sady mora, dia any aho matetika no mividy. Ny poketra no tena vidiako lafo ary “de marque” avokoa ny ahy ireny, miaraka amin’ny kiraro. Ireo kiraro avo vodin-tongotra no tena tiako, fa any an-dafy aho no mividy satria “pointure 33” ka any no tena betsaka. Raha sendra mahita eto moa aho ka tiako dia vidiako avy hatrany.
Jejoo: Farany, hafatra kely ho an’ny mpamaky ny Jejoo…
Pitsana: Mahereza foana fa aza miverin-dalana na inona na inona sedra. Tiavo foana ihany koa ny zavatra atao.